233 no sitrana soa aman-tsara…: Zandary am-perinasa telo no matin’ny Covid-19 | NewsMada
Ankoatra ireo 233 izay nahitana soritr’aretina sy ireo voatily ho tena mitondra ny valanaretina ka efa samy sitrana soa aman-tsara, nambaran’ny komandin’ny zandarimariam-pirenena, ny Jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa fa zandary telo no efa lavon’ny covid-19.
“Izahay zandary dia mitovy amin’ny olon-drehetra ary tena misy tokoa ny tratran’ny covid-19”, hoy ny Jly Andrianjanaka Njatoarisoa. Nisy tokoa, araka ny nambarany, ireo zandary nifindran’ny valanaretina co­vid-19, toy ny tany amin’ny sekolin’ny zandary ao Ambosi­tra sy ny sekoly ambonin’ny zandarimariam-pirenena any Mo­ramanga. Ho an’ny tao Ambositra, zandary fito no vita fitiliana ka ny dimy amin’ireo no “positif” raha miisa 357 kosa ireo nisy fambara ho hafahafa, teo koa ny tsy naheno fofona. Araka ny fepetra, notsaboina avokoa izy ireo ka 233 no efa sitrana. Miisa 26 kosa no efa sitrana ho an’ny ao Moraman­ga. Miisa 98 kosa ireo zandary tratran’ny covid-19 tany amin’ny faritra hafa ka ny 36 amin’ireo efa sitrana avokoa”, raha ny nambaran’ny COMGN hatrany.
“Tsy andeferana ireo minia manakorontana”
Nasiany tsindrim-peo koa ny mikasika ny fepetra efa mipetraka amin’ny hamehana ara-pahasalamana. “Raha mbo­la misy ny fandikana ny fepetra napetraky ny fitondram-panjakana dia tsy maintsy manasazy ny zandarimariam-pirenena. Hatramin’izay na­nombohan’ny hetsika fanasaziana ny olona tsy mitondra arovava izay, nahatratra fito alina ny olona nosazina ka nampanaovina asa soa iombonana”, hoy izy. Nambarany fa misy ny hetsika ataon’ny fanjakana amin’ny fizarana ny sosialim-bahoaka. Misy sivy ny toeram-pizarana iandraiketan’ny zandarimariam-pirenena ka mahatratra 300 ny olona miasa amin’ireny toerana ireny, toy ny eny amin’ny kianja malalaka manakaiky ny ambasadin’i Etazonia, ny eny amin’ny Kianja Alasora. “Rehefa misy ny fitangoronana olona toy ireny, miseho ihany ny fahasarotana ny fandrindrana ny olona. Ny zavatra hita, misy olona manao fanahy iniana mandeha amin’ireny toerana ireny ary manana tanjona hanakorontana, hanao izay hisian’ny korontana. Mampi­tan­drina ireny olona ireny izahay. Ny fanjakana efa manao ny ezaka rehetra amin’ny fanampiana ny olona. Raha misy olona tratra dia tsy andeferana fa hoentina avy hatrany eny amin’ny fitsarana”, hoy hatrany izy.
Tsy ny mpitandro filaminana no tokony hatahorana…
Nohamafisin’ity manamboninahitra ambony ity hatrany ny tokony hanajan’ny tsirairay avy ny fepetra napetraky ny fanjakana. “Aoka re mba tsy ny fahatahorana ny zandary na polisy na tafika no ametrahana ny arovavanao na hanajanao ny hetsika rehetra. Tsy ny mpitandro filaminana no tokony hatahorana fa tena anaovy ny arovava mba hiarovanao ny tenanao, ny mpiara-belona sy ny fianakavianao. Raha isika rehetra no samy mahavita mitandrina, azo antoka zato isan-jato fa ho resintsika ity valanaretina ity”, hoy izy. Ampiharina amin’izay tratra ny sazy sahaza azy.